सिलाइकटाइ व्यवसायमा रोजगारीका अवसर धेरै छन् | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०७ सिलाइकटाइ व्यवसायमा रोजगारीका अवसर धेरै छन्
on: १८ भाद्र २०७५, सोमबार १२:२८ प्रदेश ०७
सिलाइकटाइ व्यवसायमा रोजगारीका अवसर धेरै छन्
गोपाल परियार, अध्यक्ष, नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ धनगढी
कैलालीमा ५ सयको हाराहारीमा कपडा तथा सिलाइकटाइ व्यवसायी छन् । जिल्लामा यो व्यवसायमा रू. १ लाख ५० हजारदेखि ४ करोडसम्म लगानी भएको छ । शहरकेन्द्रित यो व्यवसाय पछिल्लो समय ग्रामीण भेगमा समेत विस्तार हुँदै गएको छ । जिल्लामा कुनै समय परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सिलाइकटाइ पेशा अहिले व्यावसायिक बन्दै छ । यो व्यवसायबाट मुनाफा आर्जन गर्नेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । छरिएर रहेका सिलाइकटाइ व्यवसायीलाई सङ्गठित गरी यो पेशाको व्यावसायिक विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङघ धनगढीमा स्थापना गरिँदै छ । सङ्घ स्थापनाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको बताइएको छ । प्रस्तुत छ, कपडा तथा सिलाइ व्यवसायको वर्तमान अवस्था, लगानी, चुनौती, सङ्घको आवश्यकतालगायत विषयमा नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ, धनगढीका अध्यक्ष गोपाल परियारसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं कपडा तथा सिलाइ व्यवसायमा लागेको कति भयो ?
२०२६ सालमा हाम्रो परिवार डोटीबाट कैलालीको टीकापुर बसाइ सरेर आएको थियो । शुरूमा म सामान्य कामदारको रूपमा अरूकै पसलमा सिलाइकटाइ पेशा गर्थें । अरूको पसलबाहिर एउटा सिलाइ मेशिन राखेर मैले व्यवसाय शुरू गरेँ । २०४६ सालमा सटर भाडामा लिएर ८–१० हजार लगानीबाट व्यावसायिक रूपमा यो काम थालेको हुँ । व्यवसायबाट आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि हामी टीकापुरमा घर किन्न पनि सफल भयौं । आफ्नै घर भएपछि शर्टिङशुटिङको काम पनि शुरू गर्‍यौं । टीकापुरको बलभद्र चोकमा अहिले न्यू जीपी ट्रेड सेण्टर नामबाट कपडाको व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएका छौं । यसबाट १० जनाले रोजगारी पाएका छन् । साथै, यहाँबाट धेरैले शीप सिकेर आफ्नै व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
यो पेशाप्रति मानिसको धारणा कस्तो पाउनुहुन्छ ?
पछिल्लो समय यो पेशाप्रति अधिकांशको आकर्षण बढ्दो छ । हिजोसम्म ‘यो वा त्यो जात’ले गर्ने पेशाको रूपमा लिइन्थ्यो । अहिले सबै समुदायका मानिस यो पेशामा आबद्ध छन् । केही काम गर्न सकिएन भने सिलाइकटाइ गरेर बस्छु भन्नेहरू ठाउँ–ठाउँमा देख्न/सुन्न पाइन्छ । मर्यादित पेशाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । काम सानो ठूलो हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास पनि विस्तारै हुँदै छ । शहरमा मात्रै नभएर गाउँघरमा पनि सबैले यो व्यवसाय गरेको देख्न पाइन्छ ।
यो व्यवसायबाट मुनाफा आर्जन गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
व्यावसायिक इमानदारी र मेहनतबाटै कुनै पनि व्यवसायमा टिक्न सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसाय माग र आवश्यकताको आधारमा गर्ने हो । कपडा तथा सिलाइ व्यवसायको सवालमा भन्नुपर्दा यसका लागि धेरै लगानी पनि चाहिँदैन । थोरै लगानीमा कुशल ढङ्गले काम गर्ने हो भने मुनाफा कमाउन गाह्रो छैन । व्यवसाय शुरू गरेको १० वर्षभित्रै म घर किन्न सफल भइयो । साथै, मेरो यो व्यवसायबाट धेरैले शीप तथा रोजगारी पनि पाएका छन् ।
तपाईं कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ, कैलालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यस प्रकारको सङ्गठनको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय गर्ने देशभरका व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । हाल ५७ जिल्लामा सङ्घका शाखा स्थापना भइसकेका छन् । गतिशीलता, संस्थागत एकता तथा उचित परिचालन र व्यावसायिक हकहितका लागि नै सङ्घको आवश्यकता महसूस गरिएको हो । त्यस्तै, व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने, विशेष अर्थनीति तयार गरी लागू गर्ने, सङ्घमा आबद्ध सदस्यको व्यावसायिक शीप तथा अनुभव आदानप्रदान सहज बनाउने र व्यावसायिक एकता कायम गर्ने उद्देश्यले हामी सङ्गठित भएर लागेका हौं ।
सङ्घले हाल के काम गर्दै आएको छ ?
कैलालीमा मात्रै यो व्यवसायमा आबद्ध हुनेहरू करीब ५ सय जना छन् । सङ्घ हरेक कपडा तथा सिलाइ व्यवसायीलाई सदस्यता दिने तयारीमा जुटेको छ । सङ्घमा आबद्ध प्रत्येक व्यवसायीले सङ्घप्रति उच्च विश्वास र गौरव महसूस गर्न सक्नेगरी अनुकूल परिस्थिति सृजनामा लागिपरेका छौं । यो क्षेत्रमा खासगरी दक्ष जनशक्तिको अभाव अहिले पनि छ । दक्ष जनशक्तिका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसलाई कम गर्न राज्यले शीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सङ्घले निरन्तर पहल गर्नेछ । दक्ष जनशक्तिका लागि यो क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यको योगदान नबढे युवा पलायन अझ भयावह बन्न सक्छ । त्यसैले, शीप विकास तालीममार्फत उनीहरूलाई दक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।
सङ्घले राज्यबाट गरेको अपेक्षा के हो ?
मैले अघि नै भनेँ, दक्ष जनशक्तिका लागि अहिले हामी भारतकै भर पर्दै आएका छौं । बारिहबाट जनशक्ति झिकाउनुपर्दा लागत बढी पर्छ । यसरी हामीले कति समय आफ्नो व्यवसाय धान्ने ? यसको दिगो समाधान भनेको यसै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालीम केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । यसले बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिन्छ । युवाशक्तिलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढ्न सके मात्रै हामी समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले, राज्यले यो पेशाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा सङ्घसँग सहकार्य गर्न सक्छ । हाम्रो मात्र पहलले त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएकाले राज्यको सहयोगको खाँचो महसूस गरिएको हो । कपडा सिलाउने पेशाकर्मी श्रमजीवी मात्र होइनन् । उनीहरू व्यवसायी पनि हुन् । यस क्षेत्रका पेशाकर्मीलाई व्यवसायी बन्न अभिप्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । यस्तो अभियान राष्ट्रियस्तरमै परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घको सफलताको आधार भनेकै प्रत्येक व्यवसायीको समृद्धि भएकाले योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठनलाई बलियो बनाउन हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ ।